Translate Myanmar (Burmese) to Arabic | Multilang.space
translate Myanmar (Burmese) to Arabic, Myanmar (Burmese) to Arabic translations, Myanmar (Burmese) to Arabic Google Translate ,
မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား مرحبا كيف حالك
မည်သူမဆိုရှိပါသလား? هل هناك أي شخص؟
ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ أنا أحبك حقا كثيرا
ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ, كم تكلفة هذه الهمبرغر؟
သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား? يمكنك الاتصال بي سيارة أجرة؟
ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး انا اسف
ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို أنا مهتم
အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ تأخرت رحلتي
ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို أنا هنا للعمل
မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည် مرحبا اسمي
ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို أنا آسف ولكن أنا متزوج
ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ် أود أن أسألك
သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား? يمكنك أن تأخذني إلى المطار؟
ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ ما هو الوقت المناسب الآن؟
အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ? اين يوجد أقرب مركز للشرطة؟
ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား? يمكنني استعارة شاحن الهاتف الخاص بك من فضلك؟
ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား? هل بإمكانك مساعدتي؟
ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ? طلب لي مشروب، من فضلك؟
ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ? كم يكلف؟
ငါ gluten မှမတည့်ဘူး أنا حساسية من الغلوتين
ဆရာဝန်ခေါ်ပါ اتصل بالطبيب
ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော هل هناك طبيب؟
ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား? هل يمكنني إجراء مكالمة؟
ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။ اتصل بي رئيسك من فضلك.
ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည် هذا المكان لطيف جدا
ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ خذني إلى الفندق من فضلك
အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ? ما هو رقم غرفتي؟